Dagaal Ka Dhacay Degmo Ka Tirsan Gobalka Shabeelada Hoose. – Bogga Calamada.com
Dagaal Ka Dhacay Degmo Ka Tirsan Gobalka Shabeelada Hoose.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey dagaal culus ku qaadeen degmada Qoryooley oo ka mid ah goobaha ciidamada Kufaarta iyo kuwa Murtadiinta kaga suganyihiin gobalka Shabeelada hoose.
Dagaalka waxa uu sigaar ah kaga dhacay gudaha degmada Qoryooley oo saldhig iyo fariisimo ay kal hore ka sameysteen maleeshiyaatka dowlada,waxaa gudaha degmada ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalka markii muddo kooban socday ayey maleeshiyaatka dowlada gabi ahaan isaga carareen gudaha degmada iyagoona u baxsaday difaacyada ciidamada Kufaarta AMISOM ee duleedka degmadaasi.
Askarta shisheeyaha ee difaacyada ka sameysteen duleedka degmada Qoryooley ayaa isku dayay iney kasoo baxaan difaacyadooda balse waxey dagaal culus iyagana kala kulmeen ciidamada Shabaabul Mujaahidiin,waxaana duleedka degmada sidoo kale ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Si rasmi ah looma xaqiijin khasaaraha maleeshiyaatka dowlada iyo kuwa Kufaarta kasoo gaartay dagaalka culus ee xalay ka dhacay gudaha iyo duleedka degmada Qoryooley,dagaalkan waxa uu kasoo aadayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay qarax iyo dagaal khasaara lagu gaarsiiyay kolanyo isugu jirta American,Kenyaati iyo maleeshiyaatka maamulka gaala raaca Axmed Madoobe ay ka dhaceen duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada hoose.